musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Israel Breaking News » Israel yakatanga kuburitsa bharumu nyowani hofori yekudzivirirwa kwemhepo
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Israel Breaking News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Israel yanga ichishanda nesimba kuti ivandudze dziviriro yemhepo mumakore achangopfuura nekuda kwekunetsekana nekuwanda kwema drones akagadzirwa neIran uye makombora mudunhu reMiddle East. Nyika yechiJudha inowanzotariswawo nemaroketi echinguvana uye mabharumu anopisa, akatangwa kubva kuGaza neboka remagandanga rePalestine Hamas.
New state-of-the-art missile uye ndege yekuona hurongwa huchawedzera kuwedzera kweIsrael kudzivirira kwemhepo.
Iyo Denga Dew icharumbidza iripo yeIsrael land-based yekuongorora system nekuisa mamwe masensor panzvimbo yakakwirira.
Iyo sisitimu, yakagadziridzwa neIsrael neUS, yakapinda bvunzo dzakabudirira mumwedzi ichangopfuura.
Israel Defence Ministry yakazivisa kuti yave kugadzirira kutangisa blimp hombe ichatakura hurongwa hwemazuva ano hwekudzivirira mweya.
Shumiro yakaburitsa clip online neChitatu, ichiratidza bharumu hofori ichikwiridzirwa kubva kumakona akasiyana.
Maererano nehushumiri, hutsva hwemazuva ano missile uye hurongwa hwekuona ndege huchawedzera kuwedzera simba rekudzivirira mhepo yeIsrael.
Mamiriro chaiwo endege iyi, iyo yainzi 'Sky Dew', haisati yaziviswa, asi yakatsanangurwa seimwe yemhando huru dzerudzi rwayo. Ma radars ayo anonzi anokwanisa kuona anouya marefu-refu makomba makomba, cruise missile uye drones.
Iyo sisitimu, yakabatana yakagadzirwa ne Izirayeri uye US, yakaitwa bvunzo dzakabudirira mumwedzi ichangopfuura uye yakarongwa kuti ishandiswe kuchamhembe kwenyika munguva pfupi, sekureva kwehushumiri.
Sky Dew ichazadzisa iripo Israel land-based yekuongorora masisitimu nekuisa mamwe masensor panzvimbo yakakwirira. Radar dzakakwirira dzakadaro dzinopa yakakosha tekinoroji uye inoshanda mukana wekutanga uye chaiwo kuona kutyisidzira.
Gurukota rezvekudzivirirwa kweIsrael, Benny Gantz, vakarumbidza blimp se "imwe budiriro yetekinoroji ichasimbisa kudzivirira matenga eIsrael uye vagari veIsrael." Gadziriro itsva “inosimbisa rusvingo rwedziviriro rwakavakwa naIsraeri mukutarisana nokutyisidzira kwemhepo kuri kure uye kuri pedyo kuri kuvakwa nevavengi vayo,” akadaro.
Huwandu hwevakafa kudivi reIsrael kubva mukutsinhana kwakanyanya kwemoto, panguva yekupisa pakati peIsrael neHamas muna Chivabvu, vakamira pavanhu gumi nevaviri, kusanganisira vana vaviri.